Hampitovy fijery ny Firaisamonina sivily | NewsMada
Fampiraisana ny firaisamonina sivily rehetra; hampitovy fijery amin’ny fampanjakana ny demokrasia, ny tany tan-dalàna, ny zon’olombelona… Anisan’ny tanjona amin’ny famolavolana ny Dina mifehy ny asa aman’andraikitry ny firaisamonina sivily malagasy ireo. Nampahafantarina teny Anosy, omaly, ny fahavitan’izay volavolana dina izay, ary natolotra ireo firaisamonina sivily.
Enim-bolana ny nandrafetana azy, izay misy andininy 187. Nandray anjara tamin’ny fandrafetana azy ny solontena 12 avy amin’ny firaisamonina sivily. Hanaovana fakan-kevitra eny anivon’ny faritra ny dina, mialoha ny hampiharana azy. Narafitra mba ho fampifandraisana ny foto-kevitra sy fandrindrana ireo firaisamonina sivily rehetra misy eto Madagasikara ny dina.
Tsy natao hanohitra na hanohana fanjakana izy ireo, fa natao hiara-miasa amin’ny fanjakana.
Aorian’ny fankatoavana ny dina, hiezaka mba hanana anjara toerana mavitrika eo amin’ny sehatra rehetra ny firaisamonina sivily. Amin’ny fakan-kevitra any ifotony, andrasana ny soso-kevitra. Hanao sonia azy izay resy lahatra sy manaiky izay voalaza. Ho toy ny lalàna ny dina amin’ny fampiharana azy.
Tsy fitaovana politika ny firaisamonina sivily
Anisan’ny olan’ny firaisamonina sivily hatramin’izay ny tsy fitoviam-pijery sy hevitra. Mampizarazara be ihany izany, indrindra amin’ny afitsoky ny mpanao politika na noho ny tombontsoa manokan’ny firaisamonina sivily isanisany avy. Mba hitovitoviana amin’izay momba ny fampandrosoana ankapobeny, ny demokrasia… ? Tsy ho fitaovana politika ny firaisamonina sivily amin’ny fanohanana fitondrana na fakana toerana…